U-Kevin-Prince Boateng Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts:
Ikhaya AMAZINGA AFRIKA UKevin-Prince Boateng Ingane Yomlando I-Untold Biography Facts
UKevin-Prince Boateng Ingane Yomlando I-Untold Biography Facts
Mashi 22, 2018
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Inkinga". Indaba yethu ye-Kevin-Prince Boateng Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye namaqiniso amaningi angakhulumi ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngomsebenzi wakhe ophikisanayo kodwa abambalwa bacabanga ukuthi i-Bio Kevin-Prince Boateng ye-Bio ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
U-Kevin-Prince Boateng Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts: Years Early
UKevin-Prince Boateng wazalwa ngosuku lwe-6th ka-Mashi 1987 eNtshonalanga Berlin, eJalimane. Wazalwa nomama wakhe waseJalimane, uChristmas Rahn noyise waseGhanian, uPrince Boateng, uSr.
UKevin-Prince wayesengumncane lapho uyise ehamba ekhaya ekhaya ngenxa yezinkinga zomshado. Ngakho umama wakhe waseJalimane, uCatherine, waqala ukusebenza amahora amaningi ukuze anakekele uKevin-Prince omncane.
Kanye nomfowabo omdala, uGeorge, u-Boatengs wakhulela eBerlin. UGeorge (Umfowethu omdala) noKevin-Prince bakhulela nomama wabo eBrother, isifunda esinezilimi eziningi eJalimaney. Babehlala ku cizindawo ezihluphekayo ngenkathi umfowabo omncane uJérôme ehlala nobaba endaweni ecebile kakhulu. UKevin-Prince wayaziwa ukuthi ukhona "I-Ghetto Kid" ngesikhathi sokukhula kwakhe ngenxa yokukwazi kwakhe ukuxubana nazo zonke izizwe kanye nokuhlakanipha kwakhe emgwaqeni.
Nakuba uKevin noJerome behlukana, laba bazalwane abathathu babeseduze futhi bazohlangana ngezimpelasonto nasezikoleni zamaholide ukuze badlale ibhola ndawonye.
Ngenkathi isikhathi sikaGeorge njengomdlali webhola lezinyawo esiphelile ngaphambi kokuba siqalile, izingane zakubo ezincane zaqala ukuqala. Bobabili banikezwa ikhefu labo eHertha Berlin, beza emigqeni, bangene ezigciniwe futhi ekugcineni beyiqembu lokuqala. Ukuba ngowokuqala kulaba ababili, uKevin-Prince wayengowokuqala ukwenza uphawu lwakhe.
Uqale umsebenzi wakhe osemusha kuReinickendorfer Füchse ngaphambi kokuthuthela ku-Hertha BSC lapho eseqedile umsebenzi wakhe wobusha. UCevin ufike enkundleni yakhe ePortsmouth, eMilan naseSchalke 04. Esikhundleni saseJalimane, wakhetha ukujoyina ubaba wakhe ngegazi ngokumelela i-Black Stars yaseGhana. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
U-Kevin-Prince Boateng Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts: Ukuphila Ubudlelwano
Ngenxa yokuthi uhle kakhulu, uKevin-Prince wathola amantombazane amahle ayezungeza kuye njengofana oshaka. Kodwa-ke, owesifazane oyedwa wathola indlela yakhe enhliziyweni yakhe.
Ku-2007, uBoteng ushade nomkakhe kanye nobumnandi bomntwana, uJennifer Michelle oneminyaka engu-3 emdala kunaye.
Umshado wenziwa izinsuku ezimbili ngemuva kokusayina i-Spurs ngoJulayi 2007. Wayesevele ekhulelwe ngosuku lomshado. Ingane yeBoteng, uJermaine-Prince Boateng, wazalwa ngonyaka ofanayo ku-2007.
I-Divorce: As I-Ghana Soccernet Ubeka, ukukopela okuqhubekayo kumkakhe kwaholela ekuhlukaniseni kwabo ku-2011. WayenguKevin owabetha umkakhe ngesaziso sokuhlukanisa ngemuva kokuphikisana nokuhamba kwakhe.
Ukuphuza utshwala okwenziwe utshwala kwaholela ekungabikho kwe-Boateng okungahambi kahle ekhaya okwaholela ekungqubuzaneni okukhulu phakathi kwalaba ababili abaholela esivumelwaneni esibuhlungu. UKevin-Prince Boateng waba ngumuntu ophuza njalo ngalesi sikhathi. Eqinisweni, wabonakala ephethe ugwayi futhi ephuza ngaphambi kokuthatha ukuhlolwa kwezidakamizwa.
Uthando lukaBoteng noJenny lwaphela ngemuva kokuba adlale iGhana e-2010 World Cup.
Ku-2016 umdlali waseGhana, uKevin Prince Boateng waqala ubudlelwane noJalimane oMthandayo we-TV, uMelissa Satta.
UCevin-Prince ubophe umkhonto emcimbini obuseduze ebandleni laseStella Maris e-Italy. Umkhosi olula kodwa wenhle wabona abambalwa nabangane abasondelene nabo bomndeni. Wayegqoke izingubo ezimhlophe zendabuko ngesikhathi indoda yakhe igqoke kakhulu ngombono omnyama we-tuxedo.
Umdlali webhola lezinyawo usebeneminyaka engu-4 ngaphambi komshado wabo futhi waba nendodana yabo, uMaddox Prince owaba ngumfana wekhasi lomkhosi. UKevin-Prince uthande ukuthatha umkakhe omuhle ngamaholide.
UMelissa ngaphambi komkhosi wabo womshado wabonisa ukuthi umkhosi womshado wawubalulekile kuye nakuPrince Boateng kodwa ngesikhathi uMaddox ezalwa, lo mbhangqwana wazizwa ukuthi yinto enhle ukuyenza; uhlobo lokuvikelwa kwengane yabo ethandekayo kanye neglue lokuhlanganisa umndeni.
Ngokudabukisayo nakamuva nje, uKevin-Prince Boateng noMelissa Satta babesaba ukuthi bebebhekene nezinkinga ebuhlotsheni babo ekuqaleni konyaka kodwa kamuva bahlolisisa izinto futhi baqhubeka benza ubuhlobo babo buqine.
U-Kevin-Prince Boateng Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts: Ukuphila Komndeni
Njengoba kushiwo ngaphambili, uBateeng unomama waseJalimane nobaba waseGhana. Uvela emndenini ocebile. Uyise, u-Prince Boateng, washiya iGhana ngo-1981 enethemba lokuphumula eJalimane, lapho ayefuna khona ukufunda ukuphathwa, kodwa akazange aphumelele futhi wagcina i-disc jockeying futhi esebenza njengomlindi. Ngaphansi kwe-Prince-Boateng Snr namadodana akhe lapho bebancane kakhulu.
Eminye imibhalo esemthethweni, igama lakhe linikezwa njengoKevin Boateng, kodwa yena ngokwakhe uthanda igama elithi Kevin-Prince ehlonipha uyise, uPrince Boateng. U-Christine Rahn unina kaKevin-Prince.
Uvame ukubizwa ngokuthi ukukhuthazelela ukuhlupheka ngemva kokuba umyeni wakhe amshiye yena nendodana yakhe yedwa, uKevin. Namuhla, intethelelo yindlela entsha. Kodwa-ke, kunengqondo ukusho ukuthi uChristine akasondelene nomama kaJerome Boateng kaMartina Boateng.
Umfowabo kababa kaKevin-Prince uyilungu leqembu laseGhana kanti umkhulu wakhe ongumama ungumzala wesigqila esiyingqayizivele saseJalimane uHelmut Rahn, umqeqeshi wegoli lokuwina ekugcineni kweNdebe yoMhlaba ye-1954 FIFA.
UGeorge nomfowabo omncane uJérôme yibo kuphela abafowabo. Umfowabo omdala kuthiwe uyinalenta kakhulu, umzalwane ophakathi wenza izinhloko zebhola emhlabeni jikelele kanti umfowabo omncane kakhulu unqobe iNdebe yoMhlaba ne-Champions League. Bonke bangezela emndenini.
Naphezu kokuphumelela okulandelayo kukaJérôme noKevin-Prince, ngesikhathi uGeorge wayecatshangwa ukuthi uyinethalente kunazo zonke ezintathu. Kodwa-ke, umsebenzi wakhe wokudlala ibhola wawunomkhawulo nje wokubonakala kwengubo yendawo yama-amateur. Ngemva kokupheka ejele, wagxila emsebenzini we-hip-hop.
QAPHELA: (Lesi sigameko sikaGeorge Boateng akufanele sididaniswe nomunye uGeorge Boateng, u-Holland wezwe laseGhana owadlala uFeyenoord, wathola i-League Cup noMiddlesbrough futhi waya eCoventry City, e-Aston Villa, eHull City nase-Nottingham Forest.
KuJerome, inkanyezi yaseBayern Munich (njengesikhathi sokubhala) ayizange ifihle uthando lwakhe ngobaba wakhe naseGhana. UJerome unomdwebo webalazwe lase-Afrika neGhana elibhalwe kuyo.
U-Kevin-Prince Boateng Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts: Dance
Naphezu kwemigomo yakhe, uKevin-Prince unomlingiswa omkhulu kakhulu - okuhlanganisa noMichel Jackson onokuthula okwenzayo emidlalweni ye-Milan.
U-Kevin-Prince Boateng Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts: Ama-Tattoo Facts
I-Boateng i-multiracial futhi ine-tattoo yebalazwe laseGhana negama lezwe engalweni yakhe. Lesi yisixhumanisi esibonakalayo kwifa lakhe laseGhanai.
Ngaphandle kwezimbambo zakhe, unezinhlamvu zesiChina ezichaza amagama; umndeni, impilo, uthando, impumelelo nokuthembela. U-Kevin unamanye ama-tattoos emzimbeni wakhe ophezulu futhi ashiya ibhande elinzima elibonisa i-Spiderweb. Lokhu kwaholela kuye 'Spiderman Boateng' isidlaliso.
U-Kevin-Prince Boateng Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts: Ubuhlanga
Kuzo zonke izinyathelo zokuqala zomdlalo we-Italy wesigaba se-Italy, i-Aurora Pro Patria, abadlali abamnyama baseMilan babhekene nokuhlukumezeka okuhlukumezayo kwabalandeli basekhaya. Naphezu kwezikhalazo eziqhubekayo ku-Arsenal, izikhulu azizange zenzele - ukushiya umdlali ukuba athathe izinto ezandleni zakhe. Eminithini ye-26th, uBoteng wayeka phakathi kwebhola, wayihola ibhola futhi wayishaya indiza kubalandeli abanobucayi, ngaphambi kokudubula phansi, ngokususa ihembe lakhe ngokubonisa. Kuyeke kancane ukuwashaya abalandeli bakhe, wabhekana nabadlali abaphikisayo abadlulile, ukuthola ukwesekwa nokududuzwa kwabalingani bakhe - bonke phambi kwesiteji esinqunyiwe.
Izenzo zakhe zathumela ama-shockwaves kuwo wonke amabhola ase-Italy nakakhulu. I-Boateng yagcwala imilayezo yenkxaso nokuhlonipha kusukela kumanani angaphandle nangaphandle komdlalo. Ukunciphisa amathuluzi akhe ngendlela enesibindi nokuziqhenya ngale ndlela kuye kwaba yinye yezenzo ezibukwa kakhulu ekubhekaneni nobuhlanga emdlalweni webhola enkumbulweni
Uphendule ngokushaya ibhola emasimini bese eshiya le ndawo, lapho elandelwa khona iqembu lakhe. Lo mdlalo uphinde wamiswa, futhi izenzo zakhe zanconywa ngokushesha ngabadlali abahlukahlukene nabahlaziyi phakathi komphakathi webhola.
U-Kevin-Prince Boateng Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts: Umthengisi Wezezimali
Ngesikhathi exoxwa nephephandaba iLa Gazetta dello Sport, uBateeng wembula ukuthi akacabangi ukuthi uyinkanyezi, futhi wenqaba ukukhuluma ngemali noma ingcebo. Kuyinto yolwazi lomphakathi ukuthi umdlali webhola lezinyawo uqoqe inhlanhla yakhe emangalisayo evela emabhizinisini ahlukahlukene, abaxhasi bezebhizinisi, kanye nemali engaphezu kweminyaka eyishumi yomsebenzi wakhe wezobuchwepheshe. U-Boateng ogama lakhe libizwa ngokuthi yi-TV Network DStv, omunye wabadlali bezemidlalo abahlala e-Afrika, uveza ukuthengiswa kwakhe njengomdlali kanye nemali eningi.
Ngaphambi kokusebenza kwakhe, uBateeng wenza ingozi enkulu yokuthenga izitolo zakhe. Usengasho ukuthi unomnikazi "Ezungeze ama-200 caps, azungeze ama-jacket esikhumba we-20, nama-pair of izicathulo ze-160". Ezinye izinto umdlali webhola lezinyawo owaziwa ukuthi uthenge zihlanganisa i-Lamborghini, i-Hummer ne-Cadillac, bonke ngosuku olulodwa ngemali eyisithupha.
UKevin-Prince Boateng uye wembula indlela ayechitha ngayo iminyaka ehamba phambili futhi echitha imali eningi ngokweqile. Ngamazwi akhe ...
"Eminyakeni emibili ngichitha yonke imali yami ngezimoto, amawashi, amabhuzu, ama-discos, izindawo zokudla kanye nabangane empeleni ababengabangani nhlobo," wachaza. "Ngomfana onjengaye, owakhulela endaweni empofu futhi engenamali, kwakuyingozi."
U-Kevin-Prince Boateng Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts: Ukuzisola Komsebenzi
Nakuba wayengeyona enye yezinkanyezi zesikhathi esizayo, uBoteng akazange enze kahle kuwo wonke amathalenta futhi kungenzeka ukuthi wayenakho, futhi lokho akufisa ukuthi ngabe wayehlukile.
Ngamazwi akhe: "Ngizisola ngezinto eziningi," uthe. "Lapho ngisemncane angizange ngisebenze kanzima ngoba ngangingathembela ngethalenta lami. Akuyona indlela efanele. Ngifisa sengathi ngizosebenza kanzima, kodwa kwakungokwemvelo ngaleso sikhathi ngoba ngangingumphathi welidolobha lakithi futhi nginemali nodumo. "
U-Kevin-Prince Boateng Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts: Ukhuluma uLimi Lune
UKevin-Prince Boateng ukhuluma ngezilimi ezine ngenxa yesikhathi sakhe edlala eYurophu. Ukhuluma isiNgisi, isiJalimane, isiNtaliyane nesiTurkey ngokushelelayo. Uthi uyaqonda isiFulentshi nesi-Arabhu, okuyinto enhle kakhulu kumuntu ngamunye, futhi isici esiwusizo somdlali wezemidlalo wezwe lomhlaba.
U-Kevin-Prince Boateng Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts: Iningi Lathandwa eJalimane
NgoMeyi 2010, uBateeng udlala nePortsmouth FC ekugcineni kweFIFA ngo-Chelsea, ngesikhathi ephihliwe UMichael Ballack, induna yenxusa likazwelonke laseJalimane.
U-Ballack wagcina eselimaza umgudu wakhe, wamkhipha ohlwini lwakhe lweNdebe yoMhlaba ye-2010. Lesi sigameko sasiphambene kakhulu, ikakhulukazi njengoba iBuengeng ithi uBallack wamshaya ebusweni ekuqaleni komdlalo. Lokho akuzange kuvimbele abalandeli bebhola laseJalimane yonke indawo kusukela ekuthukeleni igama likaBoteng izinyanga.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Kevin-Prince Boateng Childhood Story kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.
I-Ghanian Football Diary
I-Carlos Bacca Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
Mashi 8, 2019
George Weah Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts
Michael Essien Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
Mashi 2, 2018